Gbasara anyị - AGBALO -Elec
RAISING-Elec guzobere na 2000 dị na Houjie Town, obodo Dongguan ma nwee ndị ọrụ 180 na ụlọ nrụpụta 2 gburugburu 10,000 square ugbu a. Anyị bụ ndị nrụpụta ọkachamara OEM/ODM na -elekwasị anya na stampụ igwe na igwe & CNC, n'otu oge ahụ, anyị na -enyekwa ọrụ nkwado ma na -enye ndị ahịa "otu nkwụsị" maka usoro ọla niile, dị ka nkedo ịnwụ anwụ, ihe mkpuchi, kposara na isi iyi. Site na ahụmịhe mmepụta ọla na afọ 20 na nkwado nke ihe karịrị otu narị ndị na -emepụta ọla, anyị abụrụla ọkachamara n'ọhịa ọla.
Ihe anyị nwere ike ime？
Nnyefe bara uru nye onye ahịa anyị
1. anyị nwere ike ịnye ọrụ nkwụsị maka ụdị ngwaahịa ọla niile ahaziri gụnyere stamping, machining, cast cast, fastener and spring.
2.we nwere ike ịgbaso ihe ndị ahịa chọrọ na ihe achọrọ iji chepụta ụdị na ngwa ngwa.
3.we nwere ike inyere ndị ahịa aka ibelata ọnụ ahịa ma belata oge ndu.
4. anyị nwere ike ịkwado ndị na -ebubata ụdị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ
Ihe mere ị ga -eji na -ebuli elu？
● 1. Ịzụlite nwere ahụmịhe imepụta ọla afọ 20 yana ihe karịrị ndị nrụpụta ọla 100, anyị nwere ike nye ndị ahịa anyị ndụmọdụ ọkachamara ma melite ọnụ asọmpi ha site na ọnụ ala na ibelata oge oge ọrụ.
● 2.We nwere ndị injinia 10 na etiti R&D anyị, ha niile nwere ahụmịhe karịa afọ 15 na imewe ebu.
● 3. Njikwa Ogo siri ike: Ịzụlite agafeela ISO9001 na IATF16949, anyị enweela ihe karịrị afọ iri abụọ ahụmịhe imepụta ọla, anyị ga -achọ ịkụziri isi usoro sistemụ dị mma site na iji ngwa, mee ka ndị ọrụ anyị ghọta nke ọma otu esi ezute atụmanya na ebumnuche ebili nke ndị ahịa maka ịdị mma. Site n'ụzọ, anyị nwere ndị otu egwuregwu zuru oke gụnyere IQC, IPQC, QE, na OQC, wee soro njikwa kwesịrị ekwesị iji nyochaa ngwaahịa, tupu imepụta oke, QA ga -eme nnwale maka akụrụngwa, ngwaahịa ngwaahịa niile nwere NO nke dị mfe. lelee ma ọ bụrụ na nsogbu ọ bụla mere. Mmemme PDCA anyị na -aga n'ihu na -enye ndị ọrụ anyị ohere imeziwanye onwe ha nke ga -erite uru ọ bụghị naanị ịzụlite kamakwa ndị ahịa anyị.
● 4. Maka akụrụngwa, anyị nwere igwe nsị, igwe ịcha laser na igwe na-ehulata, ọgwụgwọ ọkụ CNC, igwe na igwe ịkpụ waya, ịgbado ọkụ-elu ntụ ntụ mkpuchi-ahịrị mgbakọ na ihe ndị ọzọ .N'ihi usoro agbakwunyere anyị nwere ike ịdị mfe ịnye ezigbo mma , ọnụahịa asọmpi na obere oge nnyefe nye ndị ahịa anyị.
Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Akụkụ stampụ nke nnukwu, Mmiri Efere, Ihe nkedo, Aluminum CNC Machined Parts, Ọnwụ nkedo Magnesium, Mpempe akwụkwọ ọla zọ ngwaahịa, Ngwaahịa niile